Ndiyabulela ukuveliswa kwamandla amakhulu, iBrithani enkulu ibambe i-industrial textile industry ekupheleni kwekhulu le-19. Ukuxhaswa ngamashishini angaphantsi, ama-eills aseUnited States ayenzima ukukhuphisana kwaze kwafika umthengisi waseBoston, owayengumthengisi wezobugcisa obizwa ngokuthi nguFrancis Cabot Lowell.
Imvelaphi yePower Loom
Imivuzo, eye isetyenziselwa ukukrazula ingubo, sele ijikeleze iwaka leminyaka.
Kodwa kwada kwangekhulu le-18 leminyaka, baqhutshwa ngesandla, okwenza imveliso yelinen ibe yinkqubela. Olu tshintshile ngo-1784 xa umqambi waseNgesi u- Edmund Cartwright wenza i-loom yokuqala. Inguqulelo yakhe yokuqala yayingenakwenzeka ukusebenza kwi-yorhwebo, kodwa engaphantsi kweminyaka emihlanu iCartwright yayiphucule ukuyila kwayo kwaye yayinxiba ingubo eDoncaster, eNgilandi.
I-Cartwright isilonda sokungaphumeleli kwintengiso, kwaye yaphoqeleka ukuba ilahle izixhobo zakhe njengenxalenye yokufakela i-bankruptcy ngo-1793. Kodwa imboni yaseBrithani yayigxininisa, kwaye abanye abavelisi baqhubeka behlaziya iCartwright. Ngowe-1842, uJames Bullough noWilliam Kenworthy babesebenzise i-loom ngokuzenzekelayo, idizayini eya kuba ngumgangatho weshishini kwikota ezayo.
Njengoko i-Industrial Revolution iqhutywe eBrithani enkulu, iinkokeli zesizwe zadlula imithetho ethile eyenzelwe ukukhusela ukulawula kwabo.
Kwakungekho mthethweni ukuthengisa i-looms yamandla okanye izicwangciso zokubakha kwabangaphandle, kwaye abasebenzi abasebenza ngokugaya babengavunyelwe ukuba bahambe. Lo thintelo aluzange nje lukhusele imboni yaseBrithani, kwaye yenza ukuba kube nzima ukuba abenzi baseMelika bezambatho, ababesasebenzisa i-looms manual, ukuba bancintisane.
Ngena uFrancis Cabot Lowell (1775-1817), umrhwebi waseBoston okhethekileyo kwiintengiso zamazwe ngamazwe kunye nezinye izinto. ULowell wayezibonele ngokwakhe ukuba ukuxabana kwamazwe ngamazwe kwaphazamisa uqoqosho lwaseMerika ngokuxhomekeke kwintengiso yangaphandle. Inye kuphela indlela yokunciphisa lo mngcipheko, uLowell wacinga ukuba, kwakungenxa yeMelika ukuphuhlisa icandelo lezentengiselwano zentsimbi eyayikwazi ukuvelisa imveliso.
Ngethuba lokutyelela eBrithani enkulu ngo-1811, uFrancis Cabot Lowell ubhekiselele kwishishini elitsha laseBrithani . Esebenzisa oonxibelelwano lwakhe, watyelela iinqununu ezininzi eNgilandi, ngamanye amaxesha azifihla. Ayikwazi ukuthenga imidwebo okanye imodeli yombane wamandla, wenza i-designer loom design kwimemori. Emva kokubuyela kwakhe eBoston, wathabatha umatshini omkhulu uPaul Moody ukumnceda ukuba aphinde abuyele oko akubonayo.
Exhaswa liqela labatyalo-mali ababizwa ngokuba yiBoston Associates, uLowell noMoody bavula umgudu wokuqala wamandla osebenzayo kuWaltham, Mass., Ngo-1814. I-Congress yabekwa ilayithi yemirhumo yomsebenzi kwi-cotton ngaphandle kwe-1816, ngo-1824, no-1828, eyenza ama-American textile khu phiswano.
Umgudu wokugaya amandla kaLowwell wawungekho nje umnikelo wakhe kumashishini aseMerika. Wabeka umgangatho omtsha weemeko zokusebenza ngokuqesha abafazi abaselula ukuba baqhube umatshini, into eyayingakuvekiyo ngaloo xesha.
Ukutshintshiselwa kokusayina isivumelwano somnyaka owodwa, uLowell wahlawula abafazi ngokufanelekileyo ngokwemilinganiselo yexesha, banika izindlu, banikezela ngamathuba emfundo noqeqesho.
Xa ilitye linciphisa umvuzo kunye neeyure ezongeziweyo ngowe-1834, iLowwell Mill Girls , njengabaqeshwa bayo, yaqulunqa i-Factory Girls Association ukuba ihlaziye ibe yimbuyekezo engcono. Nangona iinzame zabo ekuhleleni zidibanise nempumelelo, bafumana ingqalelo umlobi uCharles Dickens , oye watyelela umgubo ngo-1842.
U-Dickens udumisa oko akubona, ekuthiwa, "Amagumbi awayesebenza nawo ayalelwe njengabo ngokwawo. Kwiifestile zabanye kwakukho izityalo eziluhlaza, ezaziqeqeshelwe ukuthungela iglasi; kuzo zonke, kwakukho umoya omtsha , ukucoceka, kunye nentuthuzelo njengoko uhlobo lomsebenzi luya kuvunywa. "
UFrancis Cabot uLowell wafa ngo-1817 eneminyaka engama-42 ubudala, kodwa umsebenzi wakhe akazange afe naye. Ukuxhotyiswa kwii-400,000 zama-$ 400,000, ilitye leWaltham lincinci ngokuncintisana kwalo. Inkulu kakhulu inzuzo eWaltham yokuba iBoston Associates kungekudala yakha iindlwana ezongezelelweyo eMassachusetts, okokuqala e-East Chelmsford (ekugqibeleni yaqanjwa igama likaLowwell), kunye noCcuopee, uManchester no-Lawrence.
Ngo-1850, i-Boston Associates yayilawula enye yesihlanu yemveliso ye-textile kwaye yanda kwamanye amashishini, kuquka nemigwaqo, imali, kunye ne-inshurensi. Njengoko inzuzo yabo yakhula, i-Boston Associates yajika yaba yintsapho, yazisa izibhedlele nezikolo, kunye nezopolitiko, idlala indima ebonakalayo kwiQela le- Whig eMassachusetts. Inkampani iya kuqhubeka isebenza ukususela ngowe-1930 xa yawa ngexesha loKuPhukisa kweNdlu.
> Oluhlaza, u-Amy. "UFrancis Cabot Lowell kunye neBoston Manufacturing Inkampani." CharlesRiverMuseum.org. Ukufikeleleka ngo-8 Matshi 2018.
> Yaeger, uRobert. "UFrancis Cabot Lowell: Ubomi obufutshane bomntu osomabhizinisi waseMerika: 1775-1817." Harvard Magazine. NgoSeptemba-Oktobha 2010.
> "Lowell Mill Girls kunye ne-Factory System, ngo-1840." GilderLehman.org. Ukufikeleleka ngo-8 Matshi 2018.
Zisebenza Njani Ii-Steam Engines?
Invention ye-Polystyrene neStrofoam
'UMuckers' kaThomas Edison '
Indlela yokuCwangcisa umgca we-Brake Line
Funda iziFundo zesiFrentshi ngegama leGeographical Names
Indlela yokwabela i-Handicap Strokes kwiGrade Match Play
Amazwi adibaniswanga ngamazwi: Akukho mntu, akukho, kwaye akukho
Ukuqala kwe-20 Elements of Table Periodic
Ides ka Matshi
Iimonemonic Devices kubafundi
Umqhubi weGoland ovulekileyo wase-US
Ziziphi iintlobo ezahlukeneyo zezivakalisi?
Imigaqo ephezulu yokwazi malunga ne-Thermopylae
UCam uthetha ngengoma yakhe ethi "Burning House"
Iingcola: Abazala bakaMandulo baseDinosaurs
Yintoni iCalcutta kwiGalofu?
Uludwe lweeGrike zoBugcisa ngohlobo